सबैले जान्नै पर्ने ! आज राति १०:४८ बजेपछि यी राशिको भाग्य उदय हुने ! | Taja Khoj Khabar
Posted by Taja Khoj Khabar On February 17, 20190Comment
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – आरोग्यता बढ्ला । आर्थिक प्रगति हुनेछ । शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बृद्धि हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । रोकिएको काम बन्ला । पारिवारिक सुख शांति बृद्धि हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – प्रेममा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । ईष्टमितको साथ भेट्ला । सुख आनन्द बढ्ला । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – भागदौड भैरहला । खर्च बढ्ने अनावश्यक यात्रा हुने सम्भावना रहनेछ । सोचिविचारी योजना बनाएर काम गर्नु उचित रहला । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु कष्टदायक सावित हुनेछ । कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – विकासको नयाँ सम्भावना देखा पर्नेछ । आशा आंट उत्साहमा बढोत्तरी हुनेछ।सुख ऐश्वर्य बढ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ।लेखन प्रकाशन आदिसित सम्बन्धित काम पनि बन्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । सभासमारोहमा मान पुरस्कारको प्राप्ति होला । पारिवारिक सुख शांति बढ्नेछ । कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – समय शुभ र सौभाग्यशाली छ । मनोकूलको काम बन्नेछ । सुख आनन्द बढ्ला।मिठो भोजन खान पाइनेछ । आफन्तको साथ भेट्ला । मन प्रशन्न रहनेछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – खर्च बढ्नेछ । भागदौड भैरहला । खेलकूद भ्रमण आदिमा आकर्षण बढ्नेछ । सामान हराउने डर रहला । भुचचुक नहोस् भनेर ध्यान राख्नु पर्नेछ । बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – अन्नधन बृद्धि हुनेछ । धरपरिवारको स्थिति सन्तोष जनक रहनेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । रोकिएको काम बन्ने र लगानी उठ्ने सम्भावना पनि रहनेछ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) – कर्म पथमा अग्रसर रहिरहनु हुनेछ । सुख सम्पत्ति बृद्धि हुनेछ । दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ । राजकीय कार्य बन्ला । यश वर्चश्व बृद्धि हुनेछ । मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – यात्रा होला । शुभ र भाग्यबर्द्धक काम बन्नेछ । मनोकूलको कार्यमा सफलता मिल्नेछ । ख्याति फैलिनेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – चोटपटक र स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नु पर्ला । जोखिमपूर्ण काममा नपर्नु नै उचित हुनेछ । नियम कानूनलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ । मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – मिठो भोजन खान पाइनेछ । सुख आनन्द बढ्ला । मान सम्मान बृद्धि होला।धनसम्पत्ति बढ्नेछ । हांसविलासमा आकर्षण होला। साझेदारीसित सम्बन्धित काम पनि बन्नेछ ।
अन्य समाचार,डा.मिना झा भन्नुहुन्छ महिलाको मासुपलाउदै मा पाठेघर नै काटेर फाल्नु पर्दैन, यसरी सजिलै सँग सामाधान गर्न सकिन्छ ?तपाइ पनि एक शेयर गर्नुहोस ! बनेपाकी ३० वर्षीया शर्मिला (नाम परिवर्तन) लगातार रक्तश्राव भएपछि चिकित्सककहाँ पुगिन्। अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि चिकित्सकले भने, ‘पाठेघरमा मासु पलाएको छ, तुरुन्त अप्रेशन गर्नुपर्छ ।’ एक सन्तानकी आमा शर्मिला चिकित्सकको कुरा सुनेर आत्तिइन्। उनले औषधि खाएर निको हुन्छ कि ? भनेर सोधिन् पनि। तर, चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाएकोले पाठेघरै फाल्नुपर्ने दोहो¥याए।
दोस्रो सन्तानको योजनामा रहेका शर्मिला र उनका पतिका ला गि सुखद् समाचार थिएन यो । उनको उमेर पनि त ३० वर्ष मात्रै थियो। चिकित्सकले अप्रेशनबाहेक अर्को उपाय नभएको बताएपछि उनीहरुले अप्रेशनका लागि मिति समेत लिए।
पाठेघरमा मासु पलाएको कसरी थाहा पाउने, यसका लक्षण के–के हुन् ? पाठेघरमा मासु पलाएको शंका गर्ने प्रमुख कारण महिनावारी हुँदा धेरै रगत जानु, अत्याधिक पेट दुख्नु हो । महिनावारी हुँदा सामान्यतः५÷६ दिनमा श्राव बन्द हुनुपर्छ । तर, यस्तो समस्या भएका महिलालाई धेरै दिनसम्म रक्तश्राव भइरहन्छ । बीचमा रोकिएर फेरि श्राव हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।
पेट अत्यधिक दुख्ने तथा रगत धेरै बग्दा त्यसले अन्य समस्या पनि ल्याउँछ । शरीरमा रगतको कमी भएर एनिमिया हुने, सेतो पानी बग्ने, कमजोरी हुने, थकाई लाग्ने, रिगंटा लाग्ने, कतिपयलाई सन्तान नहुने, गर्भ रहे पनि तुहिने समस्या हुन्छ । हामीकहाँ महिलाहरु धेरै रगत बग्यो, महिनावारी हुँवा वा अन्य समयमा पनि अत्यधिक पेट दुख्यो, सन्तान भएन, गर्भ रहन्छ तर खेर गइरह्यो भन्ने जस्ता समस्या लिएर आउँछन् । उनीहरुलाई जाँच गरेपछि पाठेघरमा मासु पलाएको थाहा हुन्छ । हामीले उनीहरुसँग सोधपुछ गरी र अल्ट्रासाउण्ड गरेर निश्चित गर्छौं।
Previous: ५ बर्ष पछी मिल्दै छ यी ४ रशिलाई जिवनभर कहिले मिल्न नसक्ने सफलता ! कताई तपाई त पर्नु भएन ! जानकारीको लागि एक शेयर गर्नुहोस !
Next: पूरै ९ वर्ष पछि राहू-केतुले यी ४ राशिलाई प्रकोपबाट मुक्त गर्दै ! ४ राशिलाई मिल्नेछ जीवनकै ठूलो सफलता !